Jaalallee Kee Walqunnamtii Saalaan Gammachiisuf maal gochuu qabda? ODUU
Dawaa Nama dhukkuba Kalee dhukkubsatuu. ODUU
DHUKKUBBII DUGDAA (BACK PAIN) ODUU
DHUKKUBA TIRUU/DHUKKUBA SIMBIRAA/HEEPPATAYITASI ODUU
Fayyummaa Tiruu Keenyaa Akkamitti Eeggachuu Dandeenyaa? ODUU
Waraana Itoophiyaa: UN Itoophiyaan hojjettoota dhaabbatichaa jahaafi konkolaachistoota hunda hiikuu hime ODUU
Namoota bilbila ismaartifoonii dhiisuuf murteessaa jiran ODUU
Aappii haaluma salphaan hojii akka argattan isin gargaaru ODUU
Aappii wantoota isin suuraa keessanirraa balleessuu barbaaddan isiniif haqu.
Posted on June 25, 2022 June 25, 2022 By T A	No Comments on Aappii wantoota isin suuraa keessanirraa balleessuu barbaaddan isiniif haqu.
Unwanted Object remover apk Remove object, remove sticker, remove text on your photo With this application you can remove unwanted object of photo, you can eraser person, eraser object, eraser sticker or text on your photo. It’s all free! This is one of best applications that lets you remove unwanted content from your photos using…
Read More “Aappii wantoota isin suuraa keessanirraa balleessuu barbaaddan isiniif haqu.” »
Lakkooftuu baraa ykn Calendara Afaan Oromoo
Posted on June 25, 2022 June 25, 2022 By T A	No Comments on Lakkooftuu baraa ykn Calendara Afaan Oromoo
Lakkooftuu Baraa ykn Kalandarii Afaan Oromootiin Lakkooftuu Baraa Afaan Oromootiin This is a well-crafted android app that has the following: – Calendar, event and reminder taking tools, calendar converter and widget. You can add official Holidays, events and reminders to this application easily. You can add events and reminders by writing title of the event…
Read More “Lakkooftuu baraa ykn Calendara Afaan Oromoo” »
Lammii Seeneegaal Kaabii Laamee mootii TiikTook addunyaa ta’e
Posted on June 24, 2022 June 24, 2022 By T A	No Comments on Lammii Seeneegaal Kaabii Laamee mootii TiikTook addunyaa ta’e
Wayita ammaatti Tiik Took irratti baayyina hordoftootatin dursaa kan jiru lammii Seneegal kan ta’e Kaabee Laamedha. Dargaggeessi ganna 22 kun jecha osoo hin dubbatin mallattoo qofaa agarsiisee yaada isaa ibsachuun Tiik Taakaroota Ameerikaa caaluun sadarkaa duraa irratti aragama. Kanaan duras sadarkaa tokkoffaa qabatee kan ture Chaarlii Di Amiliyoo ture. Yeroo ammaa kana Laamen hordoftoota miliyeena…
Read More “Lammii Seeneegaal Kaabii Laamee mootii TiikTook addunyaa ta’e” »
Aappii suuraa namaa garaa daansii viidiyootti jijjiiru
Posted on June 24, 2022 June 24, 2022 By T A	No Comments on Aappii suuraa namaa garaa daansii viidiyootti jijjiiru
Head Dance: Dance Master apk Stick your face in dance videos Head Dance is an app to create your face dance videos, it’s easy to make a distinctive and funny dance video. Head Dance makes you dance in dozens of personalized videos with your face. All you need to do is to simply choose, click&upload…
Read More “Aappii suuraa namaa garaa daansii viidiyootti jijjiiru” »
Malli itisa ulfaa kan dhiiraa jiraa?
Posted on June 24, 2022 June 24, 2022 By T A	No Comments on Malli itisa ulfaa kan dhiiraa jiraa?
Deebii: akkuma beekamu ulfa karoora malee ittisuuf Yeroo baay’ee kan fayyadaman shamarroota. Biyyoota addunyaa hedduu akkasumas biyya keenya keessatti baayinaan baratamuu baatus Malli ittiin ulfa ittisan kan dhiirotaa keessa inni hanga umurii dhumaatti (permanent) beekame vasectomy jedhama. Kunis ujummoo sanyii dhiiraa (ispeermii) geejjibdee gara ujummoo keessoo qaama saalaa (Urethra) dabarsitu kan vas deferens jedhamu akkuma…
Read More “Malli itisa ulfaa kan dhiiraa jiraa?” »
Kittaannaan dhiiraaf miidhaa moo faayidaa qaba?
Posted on June 23, 2022 June 23, 2022 By T A	No Comments on Kittaannaan dhiiraaf miidhaa moo faayidaa qaba?
*qulqullinaaf:dhiirri kittaannate haala salphaadhaan qulqullina qaama saala isaa eeggachuu danda’a.Salphumatti dhiqachuun kan hin kittaanamne yoo ta’e garuu dhiqatullee akka salphaatti hin qulqullaa’uuf haguugamee jira waan ta’eef.*carraa “infeekshiinii” daandii ficaanii ni hir’isa.*carraa dhukkuboota qunnamtii saalaan daddarbanii ni xiqqeessa kana malees faaydaalee hedduu ni qaba. ●Hubadhu:Daa’ima kee manatti hin kittaansisin maaliif?1ffaa.Namichi manatti kittaanu meeshuma tokkoon daa’ima hedduu…
Read More “Kittaannaan dhiiraaf miidhaa moo faayidaa qaba?” »
Aappii ajaa’ibaa geemii taphachuu qofaan maallaqa guddaa namaaf kafalu
Posted on June 23, 2022 June 23, 2022 By T A	No Comments on Aappii ajaa’ibaa geemii taphachuu qofaan maallaqa guddaa namaaf kafalu
Get free UC, Diamonds, earn money, FF redeem code, credits and gift card. Are you looking for an app that lets you win rewards and redeem money to get game credits for your favorite games? If that is the case, this simple and easy-to-use app asks you to complete simple tasks like watch videos, watch…
Read More “Aappii ajaa’ibaa geemii taphachuu qofaan maallaqa guddaa namaaf kafalu” »
Fayyisaa Tafarii: Barataa qaxalee formulaa herregaa kalaqe beektuu?
Posted on June 23, 2022 June 23, 2022 By T A	No Comments on Fayyisaa Tafarii: Barataa qaxalee formulaa herregaa kalaqe beektuu?
Barataa Mana Barnootaa Qophaa’inaa Baakkoo, Godina Shawaa Lixaa kan ta’e barataa Fayyisaa Tafarii formulaa herregaa ‘artimeetik sikuwensi’ jedhamuu kalaquun Mana Barnootaasaarraa eegalee hanga naannootti darbees, Yunivarsitiiwwan Amboofi Saayinsiifi Teeknooloojii Adaamaatti beekamtii argateera. Akaakuuwwan barnootaa hundarra herrega akka leellisu ykn jaalatu kan hime barataan kutaa 12ffaa Fayyisaan, barnoota herregaa barattoonni danuun alaalatti sodaataniif formulaa gabaabaa kalaquu…
Read More “Fayyisaa Tafarii: Barataa qaxalee formulaa herregaa kalaqe beektuu?” »
Maanguddoo magaalaa Hawaasaa nama ilmasaanii ajjeese miila dhiqan
Posted on June 23, 2022 June 23, 2022 By T A	No Comments on Maanguddoo magaalaa Hawaasaa nama ilmasaanii ajjeese miila dhiqan
Ummanni Hawaasaa bareechee isaan beeka Obbo Maatiiyoo Dastaa. Siriiyyuu ‘injinar’ jechuun isaan waama. ‘Injinarummaa’ baratanii osoo hin taane muxannoodhuma hojii isaanitiin maqaa kennameefiidha. Waggoota 30f kutaalee biyyattii garaa garaa keessa socha’uun hojii ijaarsa manaa hojjataa turan. Hawaasaattis hayyama ijaarsaa baafachuun manneen hedduu ijaaruun galateefamaniiru. ‘Injinar’ kana qofaan miti kan beekaman. Manasaanii keessatti biiroo xiqqoo saaqqachuun…
Read More “Maanguddoo magaalaa Hawaasaa nama ilmasaanii ajjeese miila dhiqan” »
Sadiyoo Maaneen yeroo boqonnaa isaatti maal akka hojjetu beektuu?
Posted on June 23, 2022 June 23, 2022 By T A	No Comments on Sadiyoo Maaneen yeroo boqonnaa isaatti maal akka hojjetu beektuu?
Taphataa beekamaa duraanii Liiverpuul kan amma Bayern Munikiif mallatteesse Sadiyoo Maaneen akka taphattoota beekamoo kaanii nama maallaqaa fi yeroo isaa bashannanaa fi konkolaattota qaalii bituun fixu miti. Maatii harka qalleeyyii irraa dhalachuun kubbaa miilaan ammoo adunyaa irratti beekmatii kan gonfate Maaneen amantaa isaatiinis nama fakkeenyummaa guddaa qabudha. Yeroo boqonnaa isaatti yeroo hedduu mana fincaanii masjiida…
Read More “Sadiyoo Maaneen yeroo boqonnaa isaatti maal akka hojjetu beektuu?” »
Waraanni Sudaan, Abdallaa Hamdook aangoo isaanii duraanitti deebise ODUU
Dubartii Walqunnamtii Saalatiin Haalaan Gammachiisuuf ODUU
Daballiin gatii seeraan alaa gocha namoonni qaxxamuraan duroomuuf taasisaa jiran waan ta’eef mootummaan tarkaanfii cimaa ni fudhata jedhan Hoggantuun Biiroo Daldalaa Oromiyaa Aadde Hawwaa Ahimad. ODUU
Barsiisaa Abeel Bulchaa: Barattoota Naqamtee barsiisaa isaanii duraaniif konkolataa bitanirraa maal barattu? ODUU
Istirookii: Dhibee lubbuu galaafachuun akka addunyaattuu sadarkaa lammaffaarra jiru kana beektuu? FAYYAA
Siidaan Suuraa irratti argitan kun kan eenyuti? Magaalaa kamitti argama? Maalidhaan beekamu hoo? ODUU
MOLUU (BALDING) OFIRRAA ITTISUU DANDEENYA! ODUU
Tattaaffiin araaraa Keeniyaan gochaa jirtu “hunda hammataafi kan abdii namatti horudha” – Awwol Aloo (PhD) ODUU
Dargaggeessi dheerinaan Nagawoo Jimaa caalu Gujiitti argame
Waa’ee raadiyoo hangafaa Afaan Oromootiin tamsaasuu eegale kana beektuu?
Ads blocker fayyadamaa jirtu.
tajaajila nuti kenninu fayyadamuuf ads blocker keessan cufaa.